Dayaca tixraaca taarikhda hijriyada, Hiyi-raaca taarikhda madow ee miiladiga iyo sannad ka cusub ee 2015 ka. QORAA: – C/xakiin C/laahi Aaden Dheere | Somaliland Today
← is badalkii Nidaamki siyaasadeed ee qaarada Afrika dhamaadki qarnigii 20aad Q2aad, w/ Q Cabdixakiim Mukhtaar Cali
Faallo: Khaal; Samaale , Cam;Moh Biihi iyo Muj: Muuse Biixi midkeebaa xaq u leh Murashnimada Kulmiye: Abdirazak Fozi Abdirahman 26June District, Hargeisa City, Somaliland Abdurrazakfozi@hotmail.com →
Dayaca tixraaca taarikhda hijriyada, Hiyi-raaca taarikhda madow ee miiladiga iyo sannad ka cusub ee 2015 ka. QORAA: – C/xakiin C/laahi Aaden Dheere
Sannad kani waa sanad gaalo ! waa sax laakiin xagee ayuu ku dambeeyay sanad kii muslimiintu? inta kuu jawaabaysa ama lasocota halkuu marayo sidaas uma badna madaama aynu dad muslim ah nahay aaminsahayna diinta islaamka marna lagama yaabo in aynu diinteena ka guurno.
88% jadwal taariikheed ka ( calendar) la isticmaala waa kuwo ubadan bilaha miilaadiga (Gregorian calendar) , Maadama inta badan nolosha caadiga ah aan maanta la isticmaalin taarikhda islaamka , marka laga reebo waqtiyo cayiman sida xajka, soon ka IWM.
Sannad ka miilaadiga waa sannad ku xidhan dhamaan shaha 12 ka billood ee loo qoondeeyay, dhamaan magac bxinta bilaha miilaadiga guud ahaan waa kuwo kasoo farcamay xadaaradiihii roomaaniyiinta (ROMANS) sikastey ahaataba bilaha miilaadiga ama bilaha gaaladu waa kuwo asal ahaan laxidhiidha ilaahyo( Gods) ay caabudi jireen sida bilahan January , march ,may, December.
Sannad ka islaamka oo loo yaqaan HIJRA waxa uu bilaabmay marki NEBI MUXAMED (SCW) uu ka haajiray maka oo u haajirey madiina, taas oo ku beegnayd sannadkii 622 ee miilaadiga , qiyaas ( 16 July C.E 622).
Taarikhda sannadka islaamka waxa lagu tiriyaa bisha ( ama dayaxa). Waxaana uu ka kooban yahay 12 bilood kuwaas oo bilwalba tiradeeda ay ku xirantahay dhalashada bisha . badana sannadka islaamka wuxuu noqdaa 12×29.53 = 354.36 maalmood. Taas oo kadhigaysa sannadka islaamka mid 11 maalmood ka tiro yar sannadka miilaadiga ama taarikhda looyaqaan ‘’ Gregorian’’, xisaab ahaan bilaha islaamka waxa lagu qiyaasaa in ay ku dhamaadaan 30 ama 29 maalmood.
Dad aad uyar ayaa xafidsan bilaha islaamka laakiin bilaha miiladiga waa kuwo aad loo qaybay oo lagu cel-celiyay. Waa ayaan darro in maanta la isticmaalo bilo ay dejiyeen rag diinta islaamka kasoo horjeeda iyadoo la fududeystey bilihii iyo ayaamihii diinta islaam ka lagu sheegay xataa quraan ka kariim ka ah kusoo degey.
Sannadka islaamka waxa sal u ah Aayada Quraanka ee suurada “Al-tawbah” ee macneheedu yahay ‘’tirade bilaha Eebe’’
‘’ waa laba iyo toban kitaabka Eebe dhexdiisa tan iyo maalintu abuuray samooyinka iyo dhulka, waxaana kamid ah afar xurmo ( gaar ) ah leh. Bilaha islaamkuna waa kuwan hoos ku qoran:-
Soomaali hadeynu nahay sidoo kale waxaynu lahayn magacyo aynu u adeegsan jirnay bilaha waana kuwo kaliyaata ku dhexjiraa maanka waayeelka aan haatan loosoo janjeedhin dhalinyarada socod barad ka ah iyo kuwa isxaambaarsan ba , waxayna kala ahaayeen :-
Janaayo = bil kowaad
Madama dad muslim ah nahay saameyn badan inaguma yeelanayso adeegsiga bilahaas xikamada ku jirtaa waxaa weeye sidee noloshaada wax ugu badeli kartaa haddiii haatan sanad cusub lagalay, inakoo tixraacayna maah-maah da ah “ nin qoyani biyo iskama dhawro”, caqiido ahaan ma aaminsaniin bilaahaas laakin waxaynu lafal galnay istcimaalkooda, sidii loo tir-tiri lahaa bilihaas waxay u baahantahay halgan daba dheer oo jiif iyo joog ba udiidaya umadda muslimiinta.
Ereyga Sannad isma bedelo laakin koorta lusudhay ayaa ah mid isbedel badan sida 11,12.13.14.15 lagayaaba in adiga macno kuu samayn sannad dhamaaday iyo mid bilowday laakiin sannad kastoo dhamaada ogsoonow cimrigaad jirtay wax baa ka go,aya noloshuba kow bay ku dhaamaysa, bal ufiirso xisaabtan.
1 month= 4 week
1 Week =7 days
Waxa loo baahanyahay noloshaada aad wax beden ka bedesha haddad debeecado xun aad lahayd iska jar haddaad qaar cusub aad doonaysana ku qoro jadwal aad u bixisey ‘’ wax ka bedelka nafta iyo nolosha’’ markasta oo aad nafta xisaab lasamayso waxa yaarnaysa iska caabinta ay kaala hor imanayso haddaad in uun aad physics ka dhigatay waxa jiraa xeer layidhaahdo
‘’ every action has opposite reaction’’ ficil kastoo dhaca jawaab ayuu leeyahay, hadaad nolosha ka hortimaado adigey kudaba istaagi laakiin nolosha haddaba istaagin weligaa.
‘’ Noloshu waa gun iyo baar
Iyo labo isgarab yaal
Ma gudboona weligeed
( Abwaan hadraawi )
Hadal badan haan ma buuxsho alle ha inooga dhigo sannad kheyr qaba oo karaamadiisa wata adna kayeel sidaad rabto oo go,aanso geedigaaga,
W/Q: – C/xakiin C/laahi Aadan dheere
Addis –Ababa Ethiopia